Hatsarao ny fomba fanoratanao: mpampifandray lozika
Hatsarao ny fomba fanoratanao: mpampifandray ...
Fampivoarana mahomby tsara indrindra ho an'ny mailaka
Kitapom-pifandraisana amin'ny fiteny tatsinanana: Sinoa
Posted by Tranquillus | Feb 10, 2021 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Ireo mpampifandray lojika ho an'ny fanoratana matihanina tsara kokoa
Mety manoratra mailaka am-polony isan'andro ianao. Hatramin'izao, ho anao, ny fanoratana dia tsipelina, fitsipi-pitenenana, conjugation. Na dia mianatra izany isan’andro aza isika. Tsy eto no tianao hampifantohana ny ezaka ataonao amin'izao fotoana izao. Rehefa manomana a e-mail, tatitra na amin'ny ankapobeny ny karazana fanoratana rehetra. Manana fahatsapana ianao fa misy zavatra tsy mety. Ity zavatra kely ity dia tsy hita ao amin'ny antontan-taratasy ofisialy, gazety, boky. Ny voambolana, ny filaharan’ny teny, ny fampiasan’ny teny izay tena mampiavaka an’ireo mahay ny asa soratra. Atombohy ny fanavaozana ny asa soratanao amin'ny fampiasana mpampitohy lojika maharitra kokoa noho ny mahazatra.
Ireo mpampifandray lojika amin'ny inona?
Izany no antony, na izany aza, mifanohitra amin'izay, amin'ny fomba ……. Ny mpampifandray lojika dia ireo teny izay tsy maintsy ampiasaina handrafetana lahatsoratra. Hamafisina indrindra ny fifandraisana lojika misy eo amin'ireo singa samihafa amin'ny lahatsoratranao, fehezanteny iray. Inona no antony mitarika vokany toy izany sy toy izany. Inona ny zava-mitranga hahatratra izany tanjona izany. Izay mamaky anao dia hahatakatra ny teninao tsy misy amboletra.
Ny haavon'ny fiteny ampiasaina
Na eo aza izany, ny lozika sy ny tsipelina ny lahatsoratrao dia tsy mety diso. Azo atao ny miverimberina miverimberina amin'ny teny mitovy. Na izany aza, manome azy fijery masiaka. Noho izany dia tsy maintsy averinao vakiana ny lahatsoratrao nosoloina ohatra, fa amin'ny: na izany aza, amin'ny lafiny iray, sns. Mazava ho azy fa tsy hadisoana ho azy ny fampiasana katsaka. Na eo aza ny zava-drehetra, ny fampiasana mpampifandray an'ny fisoratana anarana tohana kokoa. Manampia eo noho eo avy eo ny fikasihan-tanana voadio kokoa sy matihanina kokoa amin'ny lahatsoratrao. Ny isan-karazany ny voambolanao miaraka amin'ny teny mitanjozotra izay mikoriana tsy misy famerimberenana na kely aza. Azo antoka fa hampiroborobo ny fampitana tsara ireo vaovao tianao haparitaka izahay.
HAMAKY Araraoty ny lesoka amin'ny tsipelina any am-piasana
Lisitry ny mpampifandray lozika ho an'ny fitarihana tsara kokoa ny lahatsoratrao
Ity misy lisitry ny mpampifandray hampiasaina amin'ny mailaka, tatitra sy fanoratana hafa. Amin'ny alàlan'ny fitantanana azy ireo tsara dia hanamora ny famakiana sy ny fahatakarana tsara ny lahatsoratrao. Mazava ho azy fa ny hevitra lehibe iray, izay tsy ho takatry ny olona, ​​dia hadinon'ireo tompon'andraikitra haingana eo aminao.
Tsy toy ny ao amin'ny
Raha tokony ho
Sufice mba hilaza izany
Raha lazaina amin'ny fomba hafa
Izany no antony.
Izany no antony
Toy ny hoe
Tsy toy ny
Amin'ity famolavolana ity
Amin'ity fomba fijery ity
Amin'io fomba fijery io
Amin'ny fahitana voalohany
Raha toa ka mbola
Raha ny tena izy
Ho fanoherana ny
Amin'ny fanarahana an'io hypothèse io
Ankoatra ny hafa
HAMAKY Fantaro ny fehezan-dalàna ampiasaina amin'ny sehatry ny matihanina
Na eo aza izany
Ny marimarina kokoa
Raha tsy hoe
Hatsarao ny fomba fanoratanao: mpampifandray lozika Jolay 25th, 2021Tranquillus
Teo alohaPorofon'ny ora fanampiny: ny mpiasa dia tsy mila manondro fiatoana
manarakaTonga mpitantana vondrom-piarahamonina ary manome hery vaovao ho an'ny tetikasanao
Fihaonam-pitaovana elektronika mivantana
Ny mpandray tsirairay dia samy manana ny paoziny fahalalam-pomba mety!
Taratasy fanaovan-taratasy mba hitaterana lesoka ao amin'ny paylip anao
Ahoana no hialanao amin'ny lesoka amin'ny tsipelina any am-piasana?
fifandraisana an-tsoratra sy am-bava - fiofanana maimaimpoana (14) marina (161) Fiofanana maimaimpoana ho an'ny fampandrosoana manokana sy matihanina (49) Fiofanana maimaimpoana momba ny fandraharahana (81) Fiofanana maimaimpoana Excel (28) Fiofanana matihanina (104) fiofanana maimaim-poana amin'ny fitantanana tetikasa (15) fiofanana maimaim-poana amin'ny fiteny vahiny (9) Fomba sy torohevitra amin'ny fiteny vahiny (22) Fiofanana maimaim-poana amin'ny lozisialy sy ny fampiharana (20) Modely taratasy (19) mooc (171) fiofanana maimaimpoana amin'ny fitaovana google (14) Fiofanana maimaim-poana PowerPoint (13) Fiofanana momba ny mari-barotra amin'ny Internet maimaimpoana (72) Fiofanana tsy misy teny (13)